Sii Hayaha Wasiirka Amniga Puntland Oo Beeniyey In Ciidamadu Boobeen Hub – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, Mareeg.com: Sii hayaha wasiirka amniga maamulka Puntland, Khaliif Ciise Mudan ayaa beeniyey in hub laga boobay qaar ka mid ah xarrumaha maamulka Puntland kadib markii uu doorahsad aku guuldareystay madaxweyniuhii hore ee maamulkaas C/raxmaan Faroole.
Khaliif Ciise Mudan oo la hadlay warhaabinta ayaa ka jawaabayey warar waraabhinta laga sii daayey oo sheegayey in hub lagala baxay madaxtooyada magaaloyinka Garoowe iyo Boosaaso, kadib markii uu xilka madaxweynaha ku guuleystay C/weli Maxamed Cali Gaas.
Sii hayaha wasiirka amniga ee xukuumaddii uu hoggaaminayay C/rixmaan Faroole ayaa ku dooday ineysan ciidamada ka suuroobin iney ku kacaan falalka nuucaas ah, ayna u taagan yihiin iney sugaan amaanka guud.
“Waana been eedeynta loo soo jeediyay ciidamada ammaanka, ma ahan ciidanku kuwo waxaas lugu sheegi karo, waayo kama suurowdo, waa kuwo u tagna sugidda amniga har iyo habeenna way taagan yihiin. Ciidamada qalabka sida ee Puntland waa kuwo heegan u ah haddii ay baahan yihiin iyo haddii kaleba inay sugaan amniga dalkooda,” ayuu yiri Khaliif Ciise Mudan.
Sidoo kale, mas’uulkan wuxuu caddeeyay inay diyaar u yihiin la shaqeynta iyo talo-siinta madaxda cusub ee Puntland, wuxuuna ballan-qaaday inay si hagar la’aaneed ula shaqeyn doonaan madaxweynaha cusub ee Puntland; C/weli Maxamed Cali Gaas.
Dhawaan ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in kala boob lagu bilaabay hubka iyo hanitada maamulka Puntland kadib markii uu xilka ka dhacay C/raxmaan Faroole oo 5 sano maamulkaas soo xukumayey, islamarkaana uu xilka qabtay C/weli Maxamed Cali Gaas oo horay Soomaaliya uga noqday R/wasaare.
Boobka hantida danta guud waxaa ka digay madaxweynaha maamulkaas loo doortay C/weli Gaas iyo ergayga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nickols Kay.